Coral Reef: C for Convenience
Rita said on September 5, 2010 at 9:25 PM
(အခွန်ကောက်ထားတဲ့၊ CPF တွေဖြတ်ထားတဲ့ ၀င်ငွေထဲကနေပဲ တိုင်းပြည်အတွက်၊ တိုင်းပြည်ထဲမှာ သွားလာနေထိုင်သူ လူများအားလုံးအတွက် အဆင်ပြေလွယ်ကူ သက်တောင့်သက်သာရှိအောင် ပါးနပ်တဲ့အစိုးရပီပီ လုပ်ပေးသင့် လုပ်ပေးထိုက်တာတွေ လုပ်ပေးနေတာကတော့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကျေနပ်ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းပါတယ်။)
that's absolutely right, Zun.
ကိုယ်တွေကလည်း ကိုယ်လာခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ပဲ ယှဉ်မိတာကိုး။
sonata-cantata said on September 5, 2010 at 10:10 PM
တို့ပြည်မှာလည်း ငွေစက္ကူတွေ တရားမ၀င်ကြောင်း ကြေညာတုန်းက၊ အဆင်ပြေမှုရှိအောင် ဆိုပြီး
ကျောင်းသားတွေ အိမ်အပြန် ကားတွေ၊ ရထားတွေ၊ လေယာဉ်ပျံတွေတောင် အခမဲ့ စီစဉ်ပေးလို့ ကိုဧရာတို့ အလကားစီးခဲ့ရဖူးပါသတဲ့ ဇွန်ရေ
TZA said on September 6, 2010 at 7:41 PM
အဲဒီပိတ်ဆို့မှုလေးကြောင့် ကိုယ်တို့တွေ အမောကြီးမော၊ အနာကြီးနာသွားခဲ့တာပေါ့ကွာ၊ ဖားသားကြီးနဲ့ မားသားကြီးတို့ လေယာဉ်လက်မှတ် ဆုံးခဲ့တာပေါ့ကွာ၊ ဟင်း။
အင်ကြင်းသန့် said on September 6, 2010 at 8:13 PM
အော်....ဒီလောက် အဆင်ပြေလွယ်ကူ သက်တောင့်သက်သာရှိအောင် လုပ်ပေးထားတာတောင် နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာနဲ့ လမ်းဘေးမှာ အအေးဗူးအခွံကို ဒီအတိုင်းချထားပစ်ခဲ့တဲ့လူက ရှိသေးတယ်....ဟင်းဟင်း ....ပြောမပြောချင်တော့ပါဘူး
မိုးခါး said on September 7, 2010 at 3:40 PM
မပြောချင်တော့ပါဘူး မဇွန်ရေ .. ရွှေပြည်ကြီး အကြောင်းကိုတော့ ..
သွားလာရေး လွယ်ကူအောင် လူတွေ သက်သာအောင် လုပ်ပေးတတ်တာ ဒီအစိုးရရဲ့ ကောင်းကွက် တခုပဲ ထင်ပါရဲ့ .. တွေးပေးတတ်တယ် .. စီစဉ်ပေးတတ်တယ် .. တာဝန်ယူတတ်တယ်ပေါ့ ..
ကောင်းကွက်တခုမှ ရှိအောင် မလုပ်တတ်သူတွေကတော့ .. မပြောတော့ဘူးနော် .. အကုသိုလ်များလို့ .. ခုတောင် တွေးရင်း ဒေါသက ထွက်ချင်နေပြန်ပါပြီ .. :D
Anonymous said on September 14, 2010 at 2:42 PM
sometimes.. I feel Its too much... and wastealot of money... you can see the lights at Orchard Road... That's enough.....I don't want to comment anymore..Maymadi